Faah-faahin cusub oo ku saabsan ismiidaamintii lala eegtay Taliyaha ciidanka xoogga dalka +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ka soo baxaya Khasaaraha ka dhashay weerar Ismiidaamin ah oo lala eegtay Kolonyo galbinaysay Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya oo maraayay inta u dhaxeysa Tarabuunka iyo Isbitaalka Xoogga dalka.
Intaasi kadib gaarigii ayaa qarxay, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad u badan shacab oo goobta ka agdhawaa, waxaa dhimashada ay tahay 2 ruux halka dhaawacana yahay 13 ruux.
Labada qof ee dhintay ayaa la sheegay inay kala yihiin ruuxii Ismiidaamiyay iyo ruux kale oo shacab ahaa, halka dhaawacana ay kala yihiin Saddex Askari iyo 10 ruux oo shacab ah.
Taliyaha ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya, Odawaa Yuusuf Raagge ayaa Warbaahinta dowladda u sheegay inuu nabad qabo, bartilmaameedka Qaraxana uu isaga ahaa, balse illaaladiisa oo feejigan ay rasaaseeyeen gaariga Qaraxa.
Ugu dambeyn, ammaanka Magaalada Muqdisho ayaa maalmahan dambe soo xumaanaya, waxaana Magaalada ka dhacaya falal lidi ku ah dhanka ammaanka.
Tags: ismiidaamin lala eegtay taliye Odawaa, Qarax, tarabuunka
Wasiir Goodax: Ardayda Puntland lama siin doono Shahaadada dowladda +(Ogow Sababta)
Aqalka sare oo si weyn u soo dhaweeyay qodobbadii ka soo baxay Shirkii Dhuusamareeb